UkuNyuswa kweTekhnoloji yeKhamera ye-Worn-Worn | Izisombululo ze-OMG
Ukunyuka kweTekhnoloji yeKhamera yeKhamera yeLungu leMidlalo
Enye yezinto eziphambili ezaziwa zethekhnoloji kukukhula kwayo kunye nendaleko. Kwaqala njengento engekho nje isiqwenga esilula sobugcisa, kodwa ekuhambeni kwexesha sikhula kwisigaba esitsha sokongeza inkangeleko kunye nokufumana ngakumbi kunye nokulula-kwiselula. Iicompyuter ngexesha elinye zazizalisa igumbi kwaye zinkulu kakhulu. Ngoku ikhompyuter inokuba incinci kakhulu ukuba ingakwazi ukungena entendeni, kuyafana kubonakala kwiikhamera. Iikhamera ziya zisiba ngcono kwiinkcukacha ezichaziweyo kwaye ziphuculwa rhoqo, oku kuye kwenza ukuba abaphandi kunye nomyili benze iintlobo ezingaphezulu zeekhamera ezichasene nengcinga yangaphambili. Kukho isidingo esandayo sokuhlangabezana nesidingo sokhuseleko lwabantu
Rhoqo kubakho ezo ntlanganiso zangomso apho iintetho eziphambili ziye kwamanye amagosa, zihlala zimalunga nokuziqhelanisa ngokukhuselekileyo kunye nokurekhoda nayiphi na indibano yolwaphulo-mthetho ukunceda uphando kunye nengxaki. Kodwa kukwavela amaxesha xa oku kurekhodwayo kuceliwe ngexesha lophando kwaye konke okuxeliweyo kukuba: "Mnumzana umcimbi wenzekile ngokukhawuleza kangangokuba akukho xesha laneleyo lokufaka ikhamera" oku kukhokelele ekungeneleleni kwamapolisa aliqela , ukungakwazi ukuvelisa ubungqina bevidiyo kusoloko kufumanisa izinto zinzima. Ityala lamagosa nabemi belisoloko ligcwele kakhulu kwaye ekuphela kwendlela yokujongana nayo yayikukuba nobungqina bokuba ayenzekanga njengoko bekutshiwo.
Ithuba lokungakwazi ukurekhoda isigameko liye lacotha ngokuthe ngcembe kumkhosi wamapolisa oqhubele phambili, apho ukusetyenziswa kweekhamera ezinxibe umzimba kuyinto ephambili. Ngokwenene igosa alinakusolwa, kunzima ukuba kwimeko enobunzima kwaye into yokuqala engqondweni yakho iyarekhoda ukuze ukwazi ukubonisa ubungqina kamva. Nje ukuba amapolisa angabinakho ukunika ubungqina bevidiyo ekumgaqo-nkqubo wabo, ukuthembakala koluntu kulahlekile kwaye kunzima kakhulu ukuphatha ityala. Ngamanye amaxesha, kusenokufuneka nokuba kubekho uqeqesho xa igosa lenze umsebenzi ongumzekelo okanye lithe thsuphe imeko eyingozi kakhulu. Ezi ziimeko ezingenatyala, igosa elenze umsebenzi walo kakuhle kodwa lingakwazi ukunika ubungqina bevidiyo liyabohlwaywa. Akukho mntu uyakonwabela ukohlwaywa ngakumbi xa enze kakuhle. Nditsho nenkosi yamapolisa ingabinengxaki yezopolitiko xa iimeko ezinje zenzeka phantsi kolawulo lwayo, oko kunokukhokelela kudemokhrasi okanye imibuzo.
Sikwisigaba esitsha, isizukulwana sokuqala seekhamera ezinxibe umzimba asinakuthelekiswa neekhamera zesizukulwana esitsha. Besikade sinaso eso sidingo sasendulo sokucinezela iqhosha ngesandla ukuqala ukurekhoda, njengoko kuchaziwe ngaphambili oku kubangele iingxaki ezininzi. Kwakukho nokubuyela umva okubandakanyekileyo ekusebenzeni kwizikhululo zeedoksi ukuze ukhuphele urekhodo kwiikhamera. Konke oku kunganzima kakhulu kwaye kungonwabisi. Ukusukela kudala, ubugcisa bokunyanzelwa komthetho buye babonwa buvela ngendlela enkulu, ubukrelekrele ngoku sele buxhaphakile. Kwiminyaka entsha, itekhnoloji smart iyintetho yedolophu, i-automation iyabhencwa kuyo yonke into yeetekhnoloji. Ukuvula ikhamera enxibe umzimba, itekhnoloji ye-automation smart iyakwenza oku. Oku kwenza umgaqo-nkqubo orekhodiweyo osekwe kumgaqo-nkqubo uchaneke ngakumbi kwaye ungathembakali.
Umgangatho wobudala obutsha bomgaqo-nkqubo orekhodiweyo oqhutywa zizenzekelayo
Umkhosi wamapolisa ushukumisele ukusebenzisa ubudala obuzenzekelayo oomatshini abazinxibeleyo abenziwe ukuba barekhode ngokwabo, ukurekhoda okuzenzekelayo kuye kwamkelwa ngokucacileyo ukujonga izithintelo ezibangelwe sisizukulwana esidala ezazifuna ukuba zibange. Ngokubeka ezi zixhobo ngokuzenzekelayo kumagosa asemsebenzini, ngoku angayenza indima yawo ngokufanelekileyo. Iikhamera zomzimba eziqhutywa yisoftware zicwangciswe kakuhle ukuba ziqale kwaye zimise konke ngokungqinelana nemigaqo-nkqubo ethile yokurekhoda yearhente. Ngomoya ophakamileyo (OTA) uhlaziyo olunokuthunyelwa kunye nokukhutshelwa ngekhamera ebaleni. Ukurekhodwa okusekwe kumgaqo-nkqubo kungoku kungangqinelani nemigaqo-nkqubo eqhubeka njalo yokuthengisa. Ngamanye amagama, utshintsho olwenziweyo lunokuhlengahlengiswa ngokulula ngokuhlaziya ikhamera yakho.
Ukufakelwa kweenzwa ezizenzekelayo zezithuthi kwenze ukuba kube nako ukwenza izigqibo ezinokulungiswa, ezinceda ukurekhoda irekhodi lokuzenzekelayo xa kusenziwa isenzo esithile emotweni. Umzekelo, ukurekhoda kunokuqalisa xa ukukhanya kwesibane semoto kujikelezwe kwaye kuvulwa ucango. Le teknoloji ye-automation elula esebenzayo kakhulu. Ezinye izinzwa zezithuthi zibangela ukurekhodwa kwekhamera:
Umpu kunye nesitshixo sokudubula umpu
Ezi sensors zibangela ukurekhodwa ngokuzenzekelayo. Kukwakhona itekhnoloji esebenzayo ngexesha lokulandela unyawo, kunye nenkqubela phambili kubuchwepheshe be-accelerometer. Iikhamera zobudala obutsha zinokugqiba ukuba ngaba igosa liyaqhuba okanye liyahamba, oku kuya kubangela ukurekhodwa kwekhamera. Isilumkiso esinokuzibhangisa xa elinye igosa liphantsi; oku kusebenza ngendlela ephucukileyo, kwimeko apho igosa linye lisengxakini kwaye lifuna backup. Inkqubo iqala ukurekhoda ngokuzenzekelayo kwaye iphinde iphinde ibuye emva kwemizuzu emibini yevidiyo kunye nevidiyo, isetyenziselwa ukulumkisa nokutsala umdla wamagosa akufutshane. Le nkqubo yenza okungaphezulu kokulumkisa nje amagosa akufutshane kuba ngoku baneGPS ebethelelwe kubo. Indawo yegosa elisezantsi ikwathunyelwa kunye nesilumkiso sokubandezeleka. Oku kuvumela impendulo ekhawulezayo kunye nendlela engcono kwiimeko ezinjalo.
Ozenzekelayo notshintsho lomdlalo
Olunye lwetekhnoloji ethe xhaxhe ngeenxa zonke kukubizwa kweekhompyuter ziNcediswa yiDispatch (CAD), oku kuvumela ngakumbi umgaqo-nkqubo osekelezwe ngokuzenzekelayo. Irekhoda ngokuzenzekelayo xa igosa lifumana umnxeba wenkonzo. Indawo yokulinganisa inyanzela ikhamera ukuba nje igosa lifike kwindawo ebabelwe kuyo, le ndawo inokubandakanya indawo enerabha. Indawo yokusebenza inokuqalwa yi-CAD okanye isetiwe ngesandla.
Ukuqukumbela, njengoko ukurekhodwa okusekwe kumgaqo-nkqubo kuyaqhubeka ukuba ngumgangatho, iiarhente zokunyanzeliswa komthetho ziyaxhamla kuthotyelo lomgaqo-nkqubo njengoko iimpazamo zabantu kunye nokususwa okungacacanga kushenxisiwe. Ushicilelo oluzenzekelayo lwenza ividiyo ifuneke ngokukodwa ngamaxesha abalulekileyo. Itekhnoloji yokuqhubela phambili inyusa ukuthenjwa koluntu, ukwenza izinto elubala, kunye nokuphendula kuluntu bekuqhutywa.
1188 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-4 Namhlanje